TARTARUS munhu wekutanga sainzi ngano vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe ukatora kufamba kuburikidza neValve chitoro, Steam, iwe uchaona izvi uye mamwe akawanda mazita eGNU / Linux. Icho chinyorwa chesainzi zita rekuti Tatarosi, izwi rinonyatso kuridza bhero kana iwe uchida ngano. Mutambo wemunhu-wekutanga nezve spacehip yoda kupaza Neptune, uye chinangwa chako kugona kuponesa ngarava kubva kunjodzi. Iyi ndiyo yepakati nzira iyo nyaya yese ichavakirwa uye mamishini uye matambudziko auchazonakidzwa nawo panguva yemutambo.
Iye zvino zvavewo yakaburitswa zviri pamutemo kuitira kuti tikwanise kunakidzwa navo vese vane muzvikwata zvedu zvakagoverwa GNU / Linux. Kana iwe waona vhidhiyo mutambo wetrailer, iyo zvechokwadi inokuyeuchidza iwe nezve nharaunda yakasikwa muAlien Isolate, iwo magiraidhi anotaridzika akanaka. Kana zviri zvekutarisa, pane zvese, asi vatambi vakanyanya kuvhota zvakanaka kana vakambozviedza, kunyange zvichitaridzikawo kuti vamwe vatambi vanga vasina kunaka uye mamwe ematambudziko asiri nyore kugadzirisa.
Kana iri mutauro, ye iyo yechirungu vhezheni Mutauro unoita kunge chimwe chinhu chingavandudzwa, saka tinogona kufunga kuti vanogadzira havana Chirungu serurimi rwaamai, kunyangwe mumashoko ehurumende zvinoita sekunge vanotsanangura mutambo zvakashamisa nekuda kwemutauro, asi ichi chidiki chete tsananguro isina chekusvibisa iro basa hombe rakaitwa. Izvi zvechokwadi hazvimise iwe kubva kunakidzwa kwekubira zviteshi uye kuyedza kubaya mukati meiyo spaceship's system kuti uichengetedze kubva kuTARTARUS tsaona.
Zvakare kana iwe ukaenda izvozvi kuchitoro cheStam uko TARTARUS inowanikwa iwe unogona kuwana dhisikaundi isingasvike pasi pe60%, saka uchazongobhadhara chikamu chemutengo chaiwo. Izvi zvinokonzeresa kune vane mukurumbira kutengesa Steam Nguva yechando yatinototaura newe mazuva mashoma apfuura muLxA. Uye iwe unoziva kuti handiyo chete zita rine zvakakosha zvaderedzwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » TARTARUS munhu wekutanga sci-fi vhidhiyo mutambo